VBScript-based viruses (.vbs) များကို ကာကွယ်ခြင်း [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Virus » VBScript-based viruses (.vbs) များကို ကာကွယ်ခြင်း [Tips & Tricks]
1 VBScript-based viruses (.vbs) များကို ကာကွယ်ခြင်း [Tips & Tricks] on 26th April 2010, 3:55 pm
ယနေ့ ခေတ် Virus တော်တော်များများက .exe, .com, .vbs, .cmd စသည့် double click နိုပ်လိုက်ရုံနဲ့ အလွယ်ကူ Run နိုင်တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ပဲ အင်တာနက် အီးမေးလ် တွေကတဆင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူတွေဆီကို ပြန့်နှံ့နေတတ်ပါတယ်...
ယခုတော့ VBScript ကို အခြေခံကာ .vbs extension အဖြစ် ၀င်ရောက်လာတတ်တဲ့ virus ကာကွယ်နည်းလေးကို အနည်းငယ်ဖော်ပြပေးပါမယ်... Visual Basic Scripting ဆိုတာ Microsoft က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Active Scripting language တစ်မျိုးဖြစ်ကာ Windows System တွင် Windows 98 မှစတင်ကာ Default ပါဝင်လာခဲ့တာပါ။
.vbs Virus တွေထဲမှာ အကျော်ကြားဆုံး Virus ကတော့ ILOVEYOU ဆိုတဲ့ Virus ဖြစ်ကာ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ မှာ ကွန်ပျူတာ အလုံးရေ ၁၀ သန်းခန့် နှင့် *.JPG, *.JPEG, *.VBS, *.VBE, *.JS, *.JSE, *.CSS, *.WSH, *.SCT, *.DOC *.HTA စသည့် file များကို ဒုက္ခလှလှကြီးပေးခဲ့ပါတယ်..
In Windows Explorer, select View | Folder Options နိုပ်ပါ၊ ပြီးရင် File Types ဆိုတဲ့ Tab ကိုသွားကာ VBScript file type (VBS) ကိုရွေးပါ.. ထိုကဲ့သို့ ရွေးလိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် Open With မှာ Change Button ကို နိုပ်၍ notepad ကို ရွေးလိုက်ပါကရပါပြီ... အကယ်၍ ထိုသို့မဟုတ်ပါက...
Advanced ဆိုတဲ့ button လေးကို အောက်နားမှာတွေ့နိုင်ပါသည် .
Actions ထဲက Open ကို select လုပ်၍ Edit button ကိုနိုပ်ပါက အောက်ပါ Editing action Box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်.
Application used to perform action ထဲတွင် WScript.exe အစား notepad.exe ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် .vbs extension ဖြင့် ၀င်ရောက်လာသော virus များအလုပ်လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး...
Windows Scripting Host Settings File (WSH extension) and JScript File (JS extension) တို့ကိုလည်း အထက်ပါနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။